राष्ट्रपतिको बगैँचामा रहेको हरिणको आ’क्रम’णबाट सेना जवानको ज्यान गयो ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारराष्ट्रपतिको बगैँचामा रहेको हरिणको आ’क्रम’णबाट सेना जवानको ज्यान गयो !
राष्ट्रपतिको बगैँचामा रहेको हरिणको आ’क्रम’णबाट सेना जवानको ज्यान गयो !
असुनसियन : दक्षिण अमेरिकी मुलुक पाराग्वेमा राष्ट्रपति निवास भित्र रहेको बगैँचामा हरिणको आ’क्रम’णबाट एक सेनाको नि’धन भएको छ। ४२ वर्षीय सेर्जेन्ट भिक्टोर आइज्यासीको हरिणको आ’क्रम’णबाट नि’धन भएको हो ।
राजधानी असुनसियन नजिकै रहेको राष्ट्रपति निवासमा रहेको सो हरिण भारतले उपहारस्वरुप पाराग्वेलाई दिएको थियो। उपहार स्वरुप राष्ट्रपति निवासमा राखिएको सो हरिणको आ’क्रम’णबाट आफ्ना सेनाको नि’धन भएको पाराग्वेको सेनाले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रपति निवासको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएअनुसार आ’क्रम’णमा पर्नुअघि ती सेना ह’रिण नजिक गएका थि ए। लगत्तै उनी माथि हरिणले आफ्नो सिङले आ’क्रम’ण गरेको थियो। आ’क्रम’णपछि ग’म्भीर घा’इते बनेका भिक्टोरलाई उपचारका लागि सैनिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो।
उपचार हुनु अघि नै उनलाई अस्पतालले मृ’त घोषणा गरेको थियो। जंगली ह’रिणहरु सो बगैँचामा छोडिएकाले र आफूमाथि आ’क्रम’ण हुनसक्ने ड’रले हरिण ले उनी माथि आ’क्रम’ण गरेको हुन सक्ने सेनाका प्रवक्ता कोलोनियल भिक्टोर यु’र्दापिलेटाले बताएका छन्।